कौसी क्विन फोटो प्रतियोगिता सम्पन्न, १२० सहभागी यी चारजनाले पाए पुरस्कार | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर ३ गते ०७:५२
फोटो प्रतियोगिताको सर्वोउत्कृष्ट विजेता भगवती श्रेष्ठ भएकी छन् । श्रेष्ठले रु ५५ हजार तीन सय ५० को विभिन्न कौसी खेतीका कृषि सामाग्री प्रदान गरिएको छ । तरकारी खेतीतर्फ ‘फस्ट रनर–अप’ पवित्रा भण्डारी भएकी छन् । कोपिला खनालले दोस्रो स्थान र जिग्मी लामाले तेस्रो स्थान पाएकी छन् । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा प्राप्त गर्नेले जनही रु.१६ हजार आठ सय ५० र रु १० हजार ५० मुल्य बराबरको कौसी खेतीका विभिन्न सामाग्री प्रदान गरिएको छ ।
रेखा महर्जन, फलफूल तथा पुष्प विधामा दोस्रो स्थान
फलफूल तथा पुष्प विधामा पहिलो स्थान डा. नम्रता श्रेष्ठले हासिल गरेकी छन् । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा रेखा महर्जन र तेस्रो स्थानमा सीता शर्मा अधिकारीले प्राप्त गरेकी छन् । फलफूल तथा पुष्प विधातर्फ प्रथम डा. श्रेष्ठले रु सात हजार, दोस्रोलाई रु. ६ हजार र तेस्रोलाई रु ५ हजार राशिको कौसी खेतीका सामाग्री प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अतिथिको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. मतिना जोशी वैध, कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्र बहादुर कार्की उपस्थित थिए । कात्र्तिक १ गते बाट फोटो एक साथ प्रकाशित गरिएको थियो । भने, कार्यक्रमको तयारी चार महिना अघिदेखि भएको थियो । प्रतियोगीका फोटो लाइक, सेयर तथा कमेन्ट र निर्णयक मण्डलको मुल्यांकन अनुसार विजेता छानिएका थिए । विजेतालाई खादा, प्रमाण–पत्र सहित ‘क्राउन’ ले सम्मानित गरिएको थियो । बागमति प्रदेशस्तरीय कौसी क्विन फोटो प्रतियोगितामा करिब एक सय २० सहभागी थिए ।